CutefishOS 0.5 Beta inosvika yakavakirwa paDebian 11 | Linux Vakapindwa muropa
Ndinofanira kubvuma kuti ini, uyo asiri kutara chirongwa ichi zvakanyanya, kuvandudzwa kweiyo inoshanda sisitimu ye «hove monkey» («tsoko» yebhonito) iri kundivhiringidza zvishoma. Chinhu chekutanga chandakaona kwavari yaive Manjaro spin nayo CutefishDE, gare gare vakakanda beta yeUbuntu-based operating system uye nezuro vakaburitsa imwe vhezheni yekutarisa, a Yakanakisafish 0.5 iyo ino nguva inoenderana naDebian.
Masystem anoshanda mushanduro dzawo dzakadzikama anotora nguva yakati rebei kuti ityorwe mushanduro ichangoburwa yeDebian, asi CutefishOS 0.5, iyo ichiri kunzi "Beta", haina kunetsekana zvekuti dhatabhesi ranga riripo kwenguva pfupi nekuti mukutarisa kwese vhezheni matambudziko mashoma ari kutarisirwa. Nekudaro, iyo nyowani beta iri zvichibva paDebian 11, rakaburitswa pakati paAugust.
Chii chitsva muCleanfishOSOS 0.5 Beta
Iyo maneja wefaira ikozvino inotsigira kurongedza, inogona kuratidza yakavanzwa mafaera, uye bhutsu kumhanya yakagadziridzwa.
Mukugadzirisa, iyo yekubata vhezheni sarudzo yawedzerwa, nyowani yekudzora yemufananidzo sarudzo, imwe sarudzo yekuvanda zvine hungwaru kweiyo Dock uye rondedzero yemafonti inongoratidzira mafonti emutauro wemamiriro azvino.
Launcher ikozvino inotsigira kudhonza uye kudonhedza kuti uchinje nzvimbo yekushandisa uye yakawedzera "Tumira kuDock" uye "Bvisa kubva kuDock" sarudzo.
Terminal ikozvino inotsigira kuwonekera kwehwindo, blur, uye font marongero.
Iyo sisitimu ikozvino ine chitsva chiziviso, nyowani skrini yekutora application uye nyowani vhidhiyo inoridza.
Ini handizive kana iyo yakagadzikana vhezheni ikasvika ichave yakavakirwa paDebian kana Ubuntu, asi iyo yekupedzisira mufananidzo iri mukati sw.cutefishos.com, inoita kunge ichinyatsojeka kupfuura iyo cutefish-ubuntu.github.io uko iko vhezheni inoenderana neCanonical's system inopihwa. Chinhu chega chechokwadi ndechekuti CutefishOSOS 0.5 Beta ikozvino iripo. uye panguva ino ivo vasarudza chimwe chinhu chakanyanyisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » CutefishOS 0.5 Beta inosvika yakavakirwa paDebian 11 uye nekuvandudza kwakawanda
Deepin 20.2.4 inosvika neLinux 5.13 uye kutsva kwepasirese kutsva